Rakkoo Lixa Oromiyaaf falli raayyaa ittisa biyyaati - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Rakkoo Lixa Oromiyaaf falli raayyaa ittisa biyyaati
Raayyaan ittisa biyyaa waraana karaa daangaa Somaaleetiin nurratti labsamee ture hir’isuu irratti shoora guddaa taphateera. Har’a waa’ee Liyyuu Poolisii Somaalee, humna guyyaa guyyyatti dhiiga Oromoo lolaasaa ture, wanti dhageennu heddu hin jiru. Liyyuu Poolisii adabatti kan deebise, afaan qawwee isaanii kan walitti qabachiise Poolisii Oromiyaa osoo hin taane raayya ittisa biyyaati. Balaa karaa Lixa Oromiyaatiin nurratti qiyaafates akka tasgabbeesuuf dirqamni itti laatamuu qaba.
Oromoo jilbiiffachiisuu, injifannoo argate harkaa baasuuf waraanni kan irratti labsame karaa hundaan. Karaa bahaa fi kibbaan kan nu waraanaa ture horsiisee-bulaa Somaalee akka hin turre ifa. Karaa lixaatiinis kana nu waraanaa jiru qotee-bulaa Gumuz jechuun waan hin fakkaane. Qotee-bulaan Gumuz Poolisii Oromiyaa haganaa, hagamuu hidhannoon isaanii dadhabaa haa ta’uu, nurraa ajjeesuu hin danda’u. Kan nu waraanaa jiru humna hidhate. Humna meeshaa waraanaa ammayyaa (dishqaa, sniper, radio, binocular, kkf) qabuudha. Humni poolisii kana gituu hin danda’u. Falli biraa osoo jiru poolisii gara ibiddaatti oofuun hagam gamnummaadha?
Waraana ufirraa qolachuuf ummataa fi Poolisiin Oromiyaa ijibbaata godhaa jiru. Diinni nu afoo dhaabate osoo Poolisiin Oromiyaa mataa matatti kilaashii fi rasaasa 500 qabatteeyyuu waan moo’atamu hin fakkaatu. Lakkofsa qofaan osoo hin taanee addaddummaan meeshaa waraanaa badhaan jira. Kana warri Oromiyaas mirkaneessaa jiru. Falli maaliidha?
Qe’ee fi lubbuu ufii tikfachuun dirqama lammii keenyaa ta’uyyuu, yeroon deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa itti nu barbaachisu gayeera. Raayyaan ittisa biyyaa isa kaleessaa miti. Rayyaan ittisa biyyaa leenjii, meeshaa fi muuxxannoo humna waraana nurratti labsee kana adabatti deebisuu danda’u qaba. Rayyaan biyyaa daangaa kamuu ce’ee diinota adamsuu (flash out godhuu) danda’a. Naamusni rayyaan ittisa biyyaa fooya’aa ta’uun isaa sochii inni karaa Baha Oromiyaa fi Kibbaan godhaa jiru irratti mul’ataa jira. Sodaa fi shakkii kaleessaan gaadi’amnee humna dirqama akkanaaf leenji’etti fayyadamuu dhabuun gamnummaa natti hin fakkaatu. Gatii guddaas nu kaffalchiisuu mala.
Raayyaa ittisa biyyaa dhiisnee Poolisii Oromiyaa lola akkanaaf hin leenjine bobbaasuun kan nu geessu gara reeffa laakkayachuutti. Ajjeechaan hammaate gara walkomachuu, walbalaaleffachuu fi bulchiinsa Lammaa fi Abiyyiitti quba qabachuuti. Dhumni kanaa waldiiguu fi jijjiirama gatii guddaan dhufaa jiru gufachiisuudha. Hawwiin warra waraana nutti banee kana. Kun akka dhugoomnuuf waan ta’aa jiru hunda usnee ilaaluun nurra hin jiraatu. Osoo sadarkaa too’achuuf nu rakkisu irra hin gayin dirqama rakkoo kanatti fala barbaaduu adda durummaan raayyaa ittisa biyyaatti haa kenninu. Poolisiin Oromiyaa rakkoo magaalaa fi baadiyaa keessatti nu mudatu irratti haa fulleffatu.
Previous articleTPLF jijjiiramaaf qophiidhaa miti jetti
Next articleGaafa Woyyaaneen tooftaa keennatti gammadde tooftaa keenna bira rakkoon jira jechuudha
Awash Post LIKE GODHAA